Man United oo guul soo laabasho ah Etihad kaga gaartay Man City +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man United oo guul soo laabasho ah Etihad kaga gaartay Man City +SAWIRRO
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul soo laabasho kagasoo gaartay garoonka Etihad oo ay ku booqatay kooxda ay dariska yihiin ee Manchester City.
Man City oo garoonkeeda ku ciyaareysay ayaa Man United oo marti u ah kaga kaga hormartay labo gool laakiin natiijada ayey dhinaca kale u dhigeen markii ay saddex gool ka dhaliyeen qeybtii labaad ee ciyaarta.
Goolka koowaad ee Man City ayaa yimid 25’daqiiqo qeybtii hore kaddib markii koorno uu soo qaaday Leroy Sane uu madax ku dhaliyey Kabtanka kooxda Man City ee Vincent Kompany.
Markale Man City ayaa la timid goolka labaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey Sky Blue 31’daqiiqo xiddigooda Ilkay Guendogan, kaddib markii uu dhammaystiray baas uu ka helay Raheem Sterling, Man United oo marti ahayd ayaana lagu hoggaamiyey 2-0.
Kulanka ka dhacay gaaroonka Etihad waxaa lagu kala nastay Manchester City oo ku hoggaaminaysay 2-0.
Laakiin markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Man United ayaa la timid saddex gool qeybta labaad.
Goolka hore ee Man United iyo midka labaadba waxaa u dhaliyey Pogba.
Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa 53’daqiiqo dhaliyey goolka koowaad ee ciyaarta kaddib markii karoos la soo qaaday uu xabad ugu wareejiyey Ander Herrera.
Labo daqiiqo kaddib goolkaasna Paul Pogba ayaa markale shabaqa tagay kaddib markii uu 55’daqiiqo madax ku dhaliyey karoos uu soo qaaday Alexis Sanchez, kulanka ayaana sidaas ku noqday gar isku mid ah 2-2.
Kooxda Jose Mourinho ee Man United ayaana la timid goolka guusha ciyaarta, waxaana u dhaliyey 69’daqiiqo Chris Smalling, kaddib laad xor ah oo uu soo qaaday Alexis Sanchez, waxaana kulanku uu sidaas ku noqday 3-2 ay ku gacan sarreysay Man United.
Man Utd waxa ay nasiib ku lahayd inaan lagu dhigin gool ku laad ama rigoore lagu barbareyn lahaa kaddib markii Young uu xerada ganaaxa dhexdeeda ku jilaafay Aguero, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-2 ay ku soo adkaatay kooxda Man United oo booqatay garoonka Etihad.
Kooxda tababare Pep Guardiola ayaa iska lumisay fursad ay ku qaadi lahayd horyaalka, waxaana kulankan haddii ay guuleysan lahayd ay u dabaal degi lahayd hanashada horyaalka Premier League, laakiin waxa ay ku qasbanaan doontaa inay kulankeeda xiga sugato.